Qhagamshelana ne-IC Smart Cards
Amakhadi e-RFID UHF 860-960MHz
Iphindaphindwe kabini iKhadi leRFID Card
Zeziphi izinto eziLunge kakhulu kwiiplati zentsimbi?
IAluminiyam kuzo zonke izinto ezijikeleze izinto eziluncedo, ialuminiyam inokuba ithathwa njengenye. Kuba yomelele kakhulu kwaye ayisindi, isetyenziselwe ukwenza yonke into ukusuka kwiitoti zesoda ukuya kwiindawo zenqwelomoya. Ngethamsanqa, ezi mpawu ezifanayo zenza ukuba ibe lukhetho oluhle kakhulu kumagama esiqhelo njengoko si ...
Inkqubo yolawulo lwezilwanyana zasekhaya yeRFID
Inkqubo yolawulo lwesakhono sokulandela umkhondo wesilwanyana sasekhaya iRFID isebenzisa ukukhokelela kwitekhnoloji yeRFID ukudibanisa iichips zezilwanyana ezinesitayile seRFID, ii-chip eziphathwayo kunye neenkqubo zolawulo lwezilwanyana kwisoftware, ukuqonda ulawulo olusebenzayo lomkhondo ukuza kuthi ga ngoku. Le nkqubo ...
Inkqubo yolawulo lweeasethi yeRFID
Ulawulo lweeasethi olungatshintshiyo ngumsebenzi obaluleke kakhulu kuwo onke amashishini. Ulawulo lwee-asethi olufanelekileyo lunokubonisa ngokuchanekileyo iziphumo zeshishini kunye nokusebenza kweshishini kunye nokubonelela ngesiseko sokuvavanya umsebenzi weekhadi ngexesha lolawulo. Ngaphandle koko, ulawulo olubi luya kubangela imveliso ...
I-NFC kwithegi yokujikeleza emsebenzini
Inkqubo yokusekwa kwe-NFC esekwe kwi-APP isekwe kubuchwephesha be-NFC kunye neenethiwekhi zomsebenzisi, kwaye yamkela uyilo lwesakhiwo esivulekileyo kunye nemigaqo yokusebenza yoyilo lweemodyuli ukuqonda ukudityaniswa kobhaliso lwethegi yeNFC, ukuqokelelwa kwedatha, ukungena komxholo, ukulayishwa kwexesha-lokwenyani kwedatha yekhadi, irekhodi ulawulo, umbuzo sta ...
Intshayelelo kwiithegi zokuhlamba iimpahla zeRFID
Iilebheli zokuhlamba iimpahla zenziwe ngezinto zePPS ezizinzileyo nezilunge ngakumbi. Esi sixhobo seplastikhi yentlaka yobunjineli obuphezulu kunye nobume obuzinzileyo. Inezibonelelo zokumelana nobushushu obuphezulu, ukusebenza kakuhle kokugquma, ukumelana neekhemikhali, ukungabinetyhefu, idangatye lentengiso ...
Zeziphi izibonelelo zeethegi zeRFID
I-RFID tag ye-elektroniki yitekhnoloji yokuchonga ngokuzenzekelayo. Isebenzisa imiqondiso yerediyo ukuchonga izinto ekujoliswe kuzo kunye nokufumana idatha efanelekileyo. Umsebenzi wokuchonga awufuni ungenelelo lomntu. Njengombhalo ongenazingcingo webhakhowudi, itekhnoloji yeRFID ayinamanzi kwaye ichasene ...
Amalungiselelo emveli okubanda kwempahla kunye nokugcinwa kwempahla kugcinwa azicacanga ngokupheleleyo, kwaye abathumeli kunye nabanikezeli beenkonzo zomntu wesithathu banokuthembana okuphantsi. Ukutya okufudumeza ukutya okuphantsi kakhulu, ukugcinwa kwempahla, amanyathelo okuhambisa, kusetyenziswa i-RFID temperat ...
Zithini izibonelelo zeelebheli zeshelf zombane
Iilebheli ezishelifini ze-NFC ziyasebenza kwiWal-Mart, China Resources Vanguard, Rainbow, ezinye iivenkile ezinkulu kunye neendawo zokugcina ezinkulu. Ngenxa yokuba ezi venkile kunye nendawo yokugcina izinto ikakhulu zigcina izinto, iimfuno zolawulo zingqongqo kwaye zinzima. Masithathe umzekelo ukubonisa ukuba ...